प्रधानमन्त्रीको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविन हुने - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
गुण्डा मनोज पुनलाई सघाएको भन्दै माओवादी केन्द्रका दुई केन्द्रीय सदस्य निष्कासित
अदालतको विषयमा संसदीय समितिको विजनेश बन्ने की नबन्ने ?
सांसदले व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने
सुन तस्करीकाण्डमा पूर्व आईजीपीदेखि नेतासम्म तानिदै
भारतको राष्ट्रिय सूचना आयोगले दिल्ली विश्वविद्यालयलाई सन् १९७८ को बी.ए. डिग्रीको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोही वर्ष उक्त विश्वविद्यालयबाट बी.ए.को डिग्री हासिल गरेको बताइन्छ ।
सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलुले दिल्ली विश्वविद्यालयको केन्द्रीय जनसम्पर्क अधिकृत मीनाक्षी सहायको दलीललाई पनि खारेज गरेका छन् । मीनाक्षीले त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउँदा तेस्रो व्यक्तिको नीजि जानकारी सार्वजनिक हुने भन्दै तथ्यांक दिन यसअघि अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
सूचना आयोगले विश्वविद्यालयलाई त्यस्तो तथ्यांक निःशुल्क उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन गरेको छ । आम आदमी पार्टीले मोदीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तर कुनै विवरण सार्वजनिक नगरे पनि दिल्ली विश्वविद्यालयले मोदीको प्रमाणपत्र सही भएको जनाएको थियो ।
विश्वविद्यालयले तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि मोदीको शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली हो या नक्कली भन्ने छानविन गर्न सहज हुने अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । (एजेन्सी)
रुपन्देही । माओवादी केन्द्रले गुण्डा मनोज पुन काण्...
कोरियाली नेता किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाली राष्ट्र...
सत्तारुढ दलका सदस्यहरु अदालत संसदीय निगरानी बाहि...
काठमाडौं । बिहान पौने ११ बजे सुरु भएको बिहीबारको ...
बेला–बेला मन खुलेको जस्तो । फेरि धुम्म बाँदलले ढाकेको आकास जस्तो । रजनीसँग बस्दा...